[Review] Phấn nước Missha M Magic Cushion loại nào tốt nhất? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Phấn nước Missha M Magic Cushion loại nào tốt nhất? | Muasalebang in Muasalebang
Isendlalelo sezimonyo esihle, esikhawulela ukungapheleli kwesikhumba kanye nesikhumba esikhanyayo sidinga impushana yamanzi “yaphezulu”. Phakathi kwemikhiqizo yamanje ye-makeup powder, umugqa we-Missha yigama elishiwo kakhulu engxenyeni ethandwayo kodwa elisebenza kahle kakhulu. Buyekeza i-Missha M Magic Cushion iluphi uhlobo olungcono kakhulu? Ngezansi kuzokunikeza ulwazi olwengeziwe mayelana nalo mkhiqizo.
1 Mayelana ne-Misha powder brand
2 Imibandela yokukhetha i-Missha powder efaneleke kakhulu
3 Top 5 edume kakhulu Missha M Magic Cushion
3.1 1. I-Missha Velvet Qeda Umguba SPF50+ PA+++Women
3.2 2. I-Missha M Magic Cushion – impushana engcono kakhulu namuhla
3.3 3. I-Missha Line Friends Magic Cushion – umkhiqizo onomklamo ohlaba umxhwele
3.4 4. I-Missha Minion Magic Cushion
3.5 5. Glow tension Missha Powder Brown Bear Version
4 Ungayihlukanisa kanjani i-Missha M Magic Cushion powder yangempela
Mayelana ne-Misha powder brand
Abalandeli bobuhle abasawazi ulayini wezimonyo waseKorea uMisha. Lolu hlobo lwazalwa ngo-2000 yi-Able Cosmetic Corporation. Nakuba ukubeletha kamuva kunezinye izinhlobo zezimonyo, umugqa I-Misha powder isithandwa kakhulu emhlabeni jikelele.
Kusukela ezitolo zokuqala ngo-2002 eKorea, lolu hlobo lwe-Missha seluhlanganise amazwe nezindawo ezingama-32 emhlabeni jikelele. Ngohlelo olukhulu lwezitolo lwezitolo ezingaphezu kuka-330, ukuthengiswa okufanayo konyaka kuletha inzuzo enkulu.
Imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngokuba nobuchwepheshe besimanje bokukhiqiza isiFulentshi. Kanye nocwaningo olusha lochwepheshe abahamba phambili ekunakekelweni kwesikhumba nobuhle e-Korea badale imigqa yomkhiqizo ehlaba umxhwele. Ihambisana nemboni yesimanje yobuhle yaleli zwe, uMissha wethule imikhiqizo enekhwalithi enhle kodwa eqinisekisiwe ngamanani athengekayo.
Lokhu kube nomthelela egameni lomkhiqizo, ikakhulukazi eVietnam, ngo-2205 imigqa yomkhiqizo kaMissha yavela ngokusemthethweni ezitolo zezimonyo ukusuka eNyakatho kuya eNingizimu. Kuze kube manje, u-Missha ngokuvamile kanye noMssha M Magic Cushion SPF50+/PA+++ ikakhulukazi sebephenduke ukhetho lokuqala lwabathandi bobuhle.
Imibandela yokukhetha i-Missha powder efaneleke kakhulu
Okwamanje I-Misha powder yethule imigqa eminingi yomkhiqizo enemiklamo ehlukene yokupakisha. Imikhiqizo yaziswa kakhulu ngekhwalithi yayo kanye nokubukeka okuhle. Kodwa-ke, ngezinhlobo eziningi ezahlukene, udinga ukucabangela lokhu okulandelayo ukuze uqiniseke ukuthi lokho kulungele wena.
Esokuqala sisekelwe embala wesikhumba sakho. Imikhiqizo yempushana ivame ukuba namathoni ahlukene ukuze afanele ithoni yesikhumba somuntu ngamunye kusukela kumathoni akhanyayo kuya amnyama. Ku-Missha, ngokuvamile kuzoba nemibala emi-2 eyinhloko, umbala 21, lo mbala uzoba owalabo abanesikhumba esikhanyayo. Khonamanjalo, ithoni 23 izoba ngeyalabo abanesikhumba esikhanyayo esimaphakathi.
Ngaphandle kwalokho, kubalulekile futhi ukucabangela ukuthi uhlobo lwesikhumba sakho okwamanje lunamafutha, esomile noma isikhumba esihlangene. Ngoba ngaphandle kombala, lolu hlobo luphinde luhlukanise imikhiqizo yezinhlobo ezahlukene zesikhumba. Isibonelo, ku-Missha Duck Bear powder, kukhona nezinguqulo ezi-2 ezihlukene zesikhumba esinamafutha nesikhumba esomile. Ngakho-ke udinga ukucwaninga ngokucophelela futhi mhlawumbe ubuze abasebenzi ukuze uthole iseluleko esengeziwe sokukhetha umkhiqizo oqondile owudingayo.
Top 5 edume kakhulu Missha M Magic Cushion
Ukuze uhlangabezane nezidingo zamakhasimende ngezinto eziningi ezahlukene. UMissha uklame futhi wethula imigqa eminingi yomkhiqizo ehlukene, kuhlanganisa nemi-5 ephezulu I-Misha Powder I-M Magic Cushion edume kakhulu namuhla ingezansi.
1. I-Missha Velvet Qeda Umguba SPF50+ PA+++Women
I-Missha Velvet Finish Cushion ingumkhiqizo othengiswa kakhulu wenkampani. Lapho imiphumela ye-concealer esikhumbeni iphelele kakhulu. Umkhiqizo ungakhanyisa isikhumba, ubushelelezi isikhumba futhi ngesikhathi esifanayo i-pigmentation emnyama eshiywe yi-melasma ne-acne ukuze ixazululwe kahle.
Ngaphezu kwalokho, ngalo mkhiqizo, ungase ungadingi ukusebenzisa i-sunscreen eyengeziwe, njengoba kakade iqukethe i-SPF50+ PA+++. Inkomba ephezulu ekuvikelweni kwelanga, esiza isikhumba ukuthi sivikeleke kangcono.
I-Missha powder ebomvu uma isetshenziselwa ukumboza izacile futhi ibushelelezi ngenxa yokuthungwa kwayo okuncanyana kwemvelo. Ukubamba nokugcinwa esikhumbeni kuphezulu kakhulu ngakho awudingi ukufaka isicelo kabusha usuku lonke. Ithoni yombala isezingeni futhi ayibangeli ukungakhululeki noma umuzwa onamafutha. Nge I-Misha M Magic powderakudingeki ukhathazeke ngokucwebezela kwamafutha noma ukuthungwa kwempuphu uma uyisebenzisa.
Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo ubuye uthandeke ngenxa yekhono lawo lokuhlinzeka ngomswakama esikhumbeni, usize ukukhanyisa nokukhanyisa isikhumba. Ayigcini nje ngokuhlobisa, ikusiza ukuthi uzethembe ngokwengeziwe lapho uphuma, kodwa le mpushana iphinde isize isikhumba sakho sibe nempilo futhi sibe sihle nsuku zonke. Lesi futhi isizathu sokuthi kungani, lo mkhiqizo unokukhanga okunamandla.
Intengo yesithenjwa: 205,000 VND.
2. I-Missha M Magic Cushion – impushana engcono kakhulu namuhla
Umndeni wakwaMissha nawo ungokwengqondo kakhulu lapho wethula imikhiqizo emi-2 ehlukene yolayini we-Missha M Magic Cushion. Lapho i-rim yegolide ingeyesikhumba esomile kanye nerimu yesiliva ingeyesikhumba esinamafutha. Lo mugqa woshoki odumile unomgogodla woshoki obekwe ebhokisini eliyindilinga elinempahla yepulasitiki yekhwalithi ephezulu.
Umkhiqizo unezithako zemvelo ezihlanganisa amaminerali emvelo, i-bamboo extracts, izithelo, … ukusiza ukupholisa nokuthambisa isikhumba. Yehlisa ukoma kwesikhumba kanye nesikhunta noma ukuthungwa kukakhilimu lapho usebenzisa impushana. I-witch hazel extract nayo isiza ukuqinisa ama-pores futhi inomswakama omningi.
Amandla omkhiqizo UMssha M Magic Cushion ukugqama kwekhono lokufihla kahle kakhulu. Umkhiqizo wenza abasebenzisi bahehe ekusetshenzisweni kokuqala, umphumela uba nemikhiqizo embalwa emakethe. Ngaphandle kwalokho, ikhono lokulawula kahle uwoyela lizosiza futhi ithoni yombala ukuthi ihlale isikhathi eside esikhumbeni futhi izwakale ithambile.
Intengo yesithenjwa: 200,000 VND
3. I-Missha Line Friends Magic Cushion – umkhiqizo onomklamo ohlaba umxhwele
UMssha Line Friends Magic Cushion yaziwa nangokuthi i-Missha Duck Bear Powder. Umkhiqizo oheha abantu abasha ngesitayela somklamo esihle nesiheha amehlo. Njengamanje, kukhona izinguqulo ezi-2: I-Sally Duck Bear yabantu abanesikhumba esivamile nesomile kanye ne-Brown yesikhumba esinamafutha.
Ngenxa yokuthi iwumkhiqizo wabantu abasha, i-Missha duck bear powder idala umphumela obushelelezi futhi omncane esikhumbeni. Sibukeka sigqamile futhi isikhumba esibushelelezi ngendlela engokwemvelo, ifanele nina abaya esikoleni kodwa osafuna ukuba nesikhumba esihle kakhulu. Ngakho-ke, uma ungumuntu onamaphutha amaningi amahle futhi ufuna ukugqoka izimonyo eziningi, kufanele usebenzise imigoqo eminingi yokufihla.
Lo mkhiqizo unohlu lwesithako oluphephile kakhulu, olukhishwe ikakhulukazi kumaminerali emvelo nezithelo. Lokhu kusiza ukuphakamisa amazinga omswakama wesikhumba futhi kulinganisa ithoni yesikhumba ngokusetshenziswa. I-Pheasant extract nayo ikhona kulo mkhiqizo ukusiza isikhumba sinikezwe amaminerali engeziwe ukuze sibe thambile. Isikhumba sizoba nama-pores avaliwe kanye nokuvezwa kwezimonyo okulinganiselwe.
Intengo yesithenjwa: isukela ku-250,000 kuya ku-300,000 VND.
4. I-Missha Minion Magic Cushion
Omunye umkhiqizo ophezulu I-Misha powder Ethengiswa kakhulu futhi ehamba phambili namuhla i-Missha Minion Magic Cushion. Umkhiqizo futhi unomklamo omuhle kakhulu onesithombe esihle se-Minion. Njengamanje, le nguqulo futhi inemigqa yomkhiqizo emi-2 ehlukene, elungele uhlobo lwesikhumba ngasinye: Isembozo Esimlingo sesikhumba esinamafutha kanye Nomswakama Omlingo wesikhumba esivamile nesomile.
Njengeminye imikhiqizo ye-Misha powder, i-Minion Magic Cushion ikhishwa ngokwemvelo ngokuphelele ukuze kuphephe ukuphepha okuphezulu. Amanzi e-bamboo, ukukhishwa kwe-witch hazel, njll kuzosiza ukuthambisa nokuthambisa isikhumba. Isikhumba sizokhawulela isikhunta noma umbala ongalingani lapho ufaka izimonyo.
Le mpushana yenza ukukhanya kukhanye futhi imboze ukungapheleli okumaphakathi okufana nezinduna ezincane, amakhanda amnyama, amabala, imibuthano emnyama, njll. Ngenxa yokuthi iwumkhiqizo wabantu abasha, ayizimisele kakhulu ukuba nesibindi noma ayidali ungqimba oluqinile lwe ukulungisa.
Ngaphezu kwalokho, ngemigqa yomkhiqizo emi-2 ehlukene, kungakhathaliseki ukuthi unaluphi uhlobo lwesikhumba, ungasebenzisa lo mkhiqizo. Ngisho nesikhumba esibucayi lapho umkhiqizo ulungile ngokuphelele futhi ukhiqizwa emvelweni. Isikhumba esomile asisakhathazeki ngesikhumba sabo uma begcoba izimonyo lapho lo mkhiqizo uswakama ngokwedlulele futhi uhlala amahora angu-6.
Intengo yesithenjwa: 300,000 VND.
5. Glow tension Missha Powder Brown Bear Version
Idizayini enhle ka-Missha ngokulinganayo impusha yamanzi I-Glow tension inguqulo yebhere lika-Misha Brown. Amantombazane athanda ubumnandi nobuhle kumagajethi awo, le mikhiqizo yenguqulo yebhere iyathandeka ngempela. Eduze kwebhere Elinsundu elithandekayo kunombala ophinki omuhle ovela egobolondweni lomkhiqizo elenza lithandeke futhi lehluke.
Umkhiqizo futhi awukhohlwa ukuklama isibuko nesipontshi ngaphakathi ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthwala kalula futhi bafake izimonyo noma yikuphi. Ngenxa yokuthi owentsha, usayizi womkhiqizo mncane impela, uminyene ngokwanele ukuthi ungangena esikhwameni sesikole noma sokuphuma. Lokhu kukhanga kanye nokusebenziseka kalula kuyinhlanganisela enkulu yokukhethwa kwabantu abaningi.
Umkhiqizo unomphumela omuhle ekufihleni amabala esikhumbeni, usize ukwenza isikhumba sibe nesineke futhi sikhanye. Idala isendlalelo sezimonyo esincanyana nesilula, sinikeze umsebenzisi ukubukeka okuhle nokungokwemvelo kodwa okuhlaba umxhwele nokuhle. Lo mugqa wempushana wamanzi uphinde uphumelele ekulawuleni amafutha nokulinganisa umswakama kahle esikhumbeni. Isikhumba sizokhanya futhi sibe nempilo ngokusetshenziswa njalo kwalo mkhiqizo. Ikakhulukazi, ukubamba okuhle nokusiza okuhlala isikhathi eside abasebenzisi abadingi ukufaka isicelo kabusha kaningi ngosuku.
Isici sokuvikela ilanga siphezulu kakhulu, ngakho akudingekile ukuthi usebenzise i-sunscreen eyengeziwe kodwa isikhumba sakho sisavikelekile. Izithako zemvelo ziphephe ngokuphelele esikhumbeni samantombazane asakhula. Kuze kube manje, kukhona futhi amathoni esikhumba angu-4 kulo mugqa womkhiqizo kusukela ekukhanyeni kuya kumathoni amnyama.
Intengo yesithenjwa: 155,000 VND.
Ungayihlukanisa kanjani i-Missha M Magic Cushion powder yangempela
Manje, I-Misha powder ngokuya ethandwa futhi abe choice best for girls isikhumba oily futhi like makeup. Ukukhangwa kwalo mkhiqizo kwenze imakethe yezimonyo yaba “imfiva” kulo mkhiqizo ezikhathini zamuva nje.
Ngenxa yalokhu, sekuvele imikhiqizo mbumbulu enegama likaMisha edala imiphumela eminingi yesikhumba kulabo abayisebenzisayo. Nansi indlela yokukusiza ukuthi uhlukanise, okuwumkhiqizo wangempela we-Missha powder futhi okungamanga!
Okokuqala, uvula isembozo somkhiqizo bese ubheka imininingwane ephepheni elisongwe esibukweni. Imikhiqizo yangempela ngokuvamile inongqimba lwephepha elicwebezelayo eligoqwe esibukweni ukuvikela isibuko ngesikhathi sokuthutha. Lokhu akukho ezimpahleni zomgunyathi, le mininingwane ibaluleke kakhulu ngakho udinga ukukhumbula ukukhetha.
Okulandelayo, ngaphansi kwesembozo sikashoki, uma kungumkhiqizo wangempela, kuzoba nezinhlamvu ezi-3, izinhlamvu ezi-2 kanye nenombolo engu-1. Nakuba ezimpahleni zomgunyathi, akunjalo. Ingxenye yephepha evikela ushoki nayo ihlukile, nento yangempela, izonamathiselwa ngokucophelela ukuvimbela ushoki ukuthi ungachithi. Kuma-fake, leli phepha liwubudlabha kakhulu, alikhululekile futhi lingase lingawuthinti ushoki.
Okokugcina, qaphela ingxenye yebhola likakotini enamathiselwe entweni yangempela ezoshiywa phakathi kwebhokisi le-core core kashoki kanye nengxenye eyinhloko. Amabhola kakotini mbumbulu azohlanganiswa esikhwameni sikashoki esiwumgogodla. Le mininingwane kulula ukuyikhumbula, ungaphuthelwa!
Ngenxa yokuthi iyasebenza, futhi ishibhile I-Misha powder uvotelwe yi-Totalbeauty emikhiqizweni eyi-14 ephezulu ye-BB Cushion yesikhumba esingenasici. Le yiwebhusayithi ehloniphekile emayelana nobuhle futhi ikalwe izinkomba eziningi. Namuhla, kulula ukuthola nokuthenga lo mkhiqizo uma usudume kakhulu emakethe. Buyekeza i-Missha M Magic Cushion Yikuphi okungcono kakhulu? Nazi ezinye iziphakamiso ongakhetha kuzo.
Xem Thêm [Review] Sữa tắm Tây Thi trị mụn lưng& viêm nang lông tốt không? | Muasalebang
Cách kiểm tra thẻ nhớ bằng máy tính và điện thoại đơn giản | Muasalebang